၁၉၆၆ ခုနှစ် ကျီးကန်းစစ်ဆင်ရေးနှင့် ရွှေကျီးစစ်ဆင်ရေး ဘင်္ဂလီမူဆလင်များ စစ်ဆေး၊ စာရင်းကောက်ယူခြင်း၊ မှတ်ပုံတင်ခြင်းများပြုလုပ်။ စစ်တွေ၊ မြေပုံ၊ ကျောက်တော်၊ ပုဏ္ဏားကျွန်း၊ သံတွဲနှင့် တောင်ကုတ်မှ ဘင်္ဂလီမူဆလင် (၁,၃၀၇) အား မောင်တောသို့ပြန်ပို့၊ မောင်တောခရိုင်ခွဲ၊ ကြိမ်ချောင်းမြို့နယ်ခွဲ၊ မောင်တောမြို့နယ်ခွဲ၊ အလယ်သံကျော် မြို့နယ်ခွဲများရှိ ကျေးရွာအုပ်စု (၂၃) ခုမှ ဘင်္ဂလီမူဆလင် (၅၇,၆၇၄) ဦး စာရင်းကောက်ယူ။
၁၉၆၉ ခုနှစ် မြတ်မွန်စစ်ဆင်ရေး စစ်တွေခရိုင်နှင့် ကျောက်ဖြူခရိုင်အတွင်း နိုင်ငံခြားသား ဘင်္ဂလီ မူဆလင်များ တရားမဝင် ခိုးဝင်လာမှုကို စိစစ်ခြင်း၊ မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ လူဦးရေစာ ရင်း ကောက် ယူခြင်း။
၁၉၇၄ ခုနှစ် စပ္ပါယ်စစ်ဆင်ရေး
ရခိုင်းတိုင်း၊ ချင်းဝိဒေသတိုင်း၊ ကချင်ပြည်နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်း တရားမဝင် ခိုးဝင်လာသူ နိုင်ငံခြားသား အားလုံးကို စစ်ဆေးဖမ်းဆီး အရေးယူ။
တရားမဝင်ခိုးဝင်လာသူ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံသား (၉၇၇) ဦး၊ နိုင်ငံခြားသား မှတ်ပုံတင်ရေး
အက်ဥပဒေ ကျူးလွန်ဖောက်ဖျက်သူ (၆၆၃) ဦး၊ နိုင်ငံသားဟု သံသယရှိသူ (၁၈,၂၅၄) ဦး
စစ်ဆေးတွေ့ရှိ အရေးယူ။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံသို့ ၄င်းတို့ ဆန္ဒအလျောက် ပြောင်းရွှေ့
သွားသူ ဘင်္ဂလီမူဆလင် မောင်တောမြို့နယ်မှ (၁,၄၁၅) ဦး၊ ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်မှ
(၅၅၀) ဦး၊ ရသေ့တောင်မြို့နယ်မှ (၉၉၅) ဦး၊ စုစုပေါင်း (၂,၉၀၀) ဦး။
၁၉၇၈ ခုနှစ် နဂါးမင်းစီမံချက်နှင့် ဟသာင်္စီမံချက် ပထမအဆင့် – စစ်တွေမြို့နယ်၊ စစ်ဆေးခဲ့သည့် လူဦးရေ (၃၆,၈၂၄) ဦး၊ ဘင်္ဂလီမူဆလင် (၁,၃၁၆) ဦးအား လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ဥပဒေအရ၄င်း၊ (၁,၀၂၅) ဦးအား နိုင်ငံခြားသား မှတ်ပုံတင်ရေးနှင့် အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ရေး အက်ဥပဒေများအရ အရေးယူ။
ဒုတိယအဆင့် – ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်နှင့် မောင်တောမြို့နယ်၊ စစ်ဆေးခဲ့သည့် လူဦးရေ. ၂၃၄,၃၂၄) ဦး၊ ဥပဒေအရ အရေးယူခံရသူ ဘင်္ဂလီမူဆလင် (၁,၁၀၁) ဦး။ ထွက်ပြေးခဲ့သူများမှာ (၁၅၆,၆၉၀) ဦး၊ ပြန်ဝင်လာသူ (၁၈၆,၉၈၆) ဦး၊ (၃၀,၂၇၈) ဦး အပိုလက်ခံခဲ့ရ။
၂၀၁၂ ခုနှစ် … ??? … ??? … ??? …(By Maung Thant)
← Govt on alert over Rohingya intrusion: Tuku
Ko Ko Gyi “Rohingya Bengali is not one of the ethnic groups of Myanmar at all →